Wacaal Daray ah: Guddoomiyaha gobolka Bari oo caawa ka badbaaday qarax lala beegsaday. – Radio Daljir
Luulyo 1, 2010 12:00 b 0
Bossaso, July 01 – Qarax aad u xoog badan oo la sheegey in uu yahay nooca sheedda laga hago ayaa goor dhawayd oo caawa ah lala beegsaday guddoomiyaha gobolka Bari C/xaafid Cali Yuusuf, kaas oo ka badbaaday shirqoolka la maleegey.
Qaraxan oo laga wada maqlayay magaalada Boosaaso ayaa ka dhacay badhtamaha magaalada, mid ka mid ah ilaalada guddoomiyaha ayaana la sheegey in uu ku geeriyooday, sidoo kale laba ruux oo rayid ah ayaa iyana ay wararku sheegayaan in ay qaraxaas ku dhinteen, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
Tan iyo imika ma jirto cid si rasmi ah loogu xidhay weerarkaas. Tiro qaraxyo ah oo hore uga dhacay Boosaaso ayaa sababay dhimashado iyo dhaawac, waxana xusid mudan in dilal abaabulan tan iyo dabayaaqada sannadkii hore lagu laayay tiro dad ah oo masuuliyiinna ay ka mid ahaayeen.
Madaxda Puntland ayaa in badan ka hadlay fal dambiyeedyadaas, ugu baaqay shacabku in ay dowladda kala shaqeeyaan dagaal ka dhan ah dambiileyaasha shirqoollada maleega.
Abwaan Jaamac Kediye Cilmi oo gabay wadani ah ka tiriyey munaasabada xuska 26-ka June & 1-da July.